Offshore Banking - သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအကောင့်ဖွင့်နည်း
ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် | အကောင်းဆုံးအကောင့်ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
ကမ်းလွန်ဘဏ် သူနေထိုင်သောတိုင်းပြည်ပြင်ပတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်းပါ ၀ င်သည်။ လူများသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဤအကောင့်များကိုဖွင့်ကြသည်။ ၎င်းတို့တွင်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတရားစွဲဆိုမှုများ၊ ကြွေးရှင်များနှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များမှကာကွယ်ခြင်းအပြင်အခွန်စုဆောင်းခြင်းနှင့်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့တသမတ်တည်းဤဆောင်းပါးကို update ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင့်အားမည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မည်သို့ဆွေးနွေးရမည်ကိုဆွေးနွေးရန်အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုပေးရန်ဖြစ်သည် ကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။ ဥပဒေများ၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်အဓိပ္ပါယ်များကိုလည်းဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ကျနော်တို့အခြေခံအဆင့်မြင့်သတင်းအချက်အလက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ် အခမဲ့အွန်လိုင်းစာအုပ် အောက်မှာမြင်ရလိမ့်မယ်
အနောက်နိုင်ငံများရှိဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည်။ ဒါဟာတကယ်တော့ဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာဘာလဲ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံးဘဏ် ၃၀ တွင်ဤစာ၌ဖော်ပြထားသည်။
အဘယ်သူမျှမ ကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံးဘဏ် ၃၀ တွင် အဘယ်သူမျှမ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်ရှိသည်။ သုည။
အလုံခြုံဆုံးဘဏ် ၅၀ အနက်မှသာ ငါး သူတို့ထဲကအမေရိကန်၌တည်ရှိသည်။
စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်တစ်ခုတည်းသောအမျိုးသားဘဏ်သည် ၅၀ အနက်အဆင့် ၅၀ တွင် (နောက်ဆုံးနေရာ) ဖြစ်သည်။
အဆင့်ခြောက် AAA ရှိသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်များ.
AAA အဆင့်သတ်မှတ်သည့်ဘဏ်ခြောက်ခုအနက် အဘယ်သူမျှမ ယူအက်စ်တွင်တည်ရှိသည်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်း - ဘက်စုံလမ်းညွှန်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ - Deep in Deep
စဉ်းစားပါ။ ယူအက်စ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကြွေးမြီအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားတိုင်းပြည်နီးကပ်လာပါတယ်။ အကြီးမားဆုံးသောအမျိုးသားကြွေးမြီဝန်လေးနေသောနိုင်ငံလေးခုတွင်အမေရိကန်သည်ယူကေနံပါတ် (၂) နှင့်အကြိမ် (၃) ဆခွဲခန့်ရှိပြီးပြင်သစ်နှင့်ဂျာမနီ (၄) ခုထက်ပိုသည်။
ရင်းမြစ်: Visual ၏ယဉ်ကျေး အရင်းရှင်
ထို့ကြောင့်အထက်ပါအဖွင့်ဖော်ပြချက်သည်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်စေသောခေါင်းစဉ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံ၍ စင်ကြယ်သောအချက်ဖြစ်ပါသည် ထို့အပြင်အမေရိကန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလေးစားခံရဆုံးသောကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အစိုးရအကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်သည့်အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သော Standard & Poor's မှချေးငွေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြည်သူများသည်၎င်းတို့၏နေရင်းနိုင်ငံတွင်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းကိုတားမြစ်ထားသည့်ဥပဒေများမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်စတင်ရန်သို့မဟုတ်ပိုမိုသိရှိလိုပါကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပုံစံကို သုံး၍ ဤစာမျက်နှာရှိနံပါတ်များကိုခေါ်ဆိုပါ။ ဤအတောအတွင်း, ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ပါလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ.
အသစ် ကမ်းလွန်အကောင့်များ? သင့်ရဲ့နားလည်မှုကိုရှင်းလင်းဖို့လိုပါသလား? ပြည်ပမှာအကောင့်ဖွင့်ချင်ပါသလား? အောက်ကလမ်းညွှန်ဟာသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်စတင်ရန်နှင့်သင်၏ဗဟုသုတပိုမိုခိုင်မာစေရန်အတွက်ပြည့်စုံသောအချက်အလက်များကိုပေးသည်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် & အခမဲ့စာအုပ်
အခန်းကြီး 1: ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်: အဲ့ဒါဘာလဲ? အဘယ်ကြောင့်တစ်ခုရှိသနည်း
- အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ သိကောင်းစရာများနှင့်မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်
အခန်းကြီး 2: အဆိုပါ အကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်း ၅ ကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် - ကပြုတ်
အခန်းကြီး 4: ဒဏ္ဍာရီ
အခန်းကြီး 5: ဘေးကင်းရေးနှင့်လုံခြုံရေး
အခန်းကြီး 6: ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း
အခန်းကြီး 7: ၆ အကောင်းဆုံးနိုင်ငံများ- ကမ်းလွန်ဘဏ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များစာရင်း
အခန်းကြီး 8: ကမ်းလွန်အကောင့် Setup - ဘာလုပ်မလဲ
အခန်းကြီး 9: ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုန်သည်စာရင်းများ
အခန်းကြီး 10: ကုန်ကျစရိတ်များ
အခန်းကြီး 11: အကြံပြုထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ
အခန်းကြီး 12: ဆွစ်ဘဏ်လုပ်ငန်း
အပိုဆုအခန်း Bitcoin နှင့်အခြား Cryptocurrency
ယူအက်စ်ဘဏ်ပျက်ကွက်မှုများ၊ ၂၀၀၀ မှ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ ခန့်မှန်းချက်
အချို့သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတားအဆီးအချို့သည်ဘဏ်လုပ်ငန်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဥပမာအားဖြင့် Bank of America Corporation သည်စိတ်ဖိစီးမှုစစ်ဆေးခြင်းကိုမအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းမကြာမီကအသိပေးခံခဲ့ရသည်။ စမ်းသပ်မှုအရဘဏ်သည်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်စီးပွားရေးအခက်အခဲများကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောသိုက်ပမာဏဒေါ်လာ ၃၃.၉ ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့နည်းကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
အမေရိကန်ဘဏ်များကိုအာမခံရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အေဂျင်စီပင်လျှင် FDIC ကိုယ်တိုင်ပင်အလွန်တိုတောင်းလှသည်။ ၎င်းတို့တွင်အမေရိကန်ဘဏ်စနစ်ကိုအာမခံရန်အတွက်ဥပဒေအရလိုအပ်သောငွေပမာဏမရှိပါ။
ထို့အပြင်ယူအက်စ် Federal Reserve သည်ရေခဲပြင်ပေါ်တွင်စကိတ်စီးနေသည်။ မြို့တော်အချိုးသည် ၁.၂၄ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။ စဉ်းစားပါ။ Lehman Brothers သည်ဒေဝါလီခံခြင်းအတွက်တင်သွင်းသောအခါ ၃% တွင်ရှိသည်။
မကြာသေးမီကအကဲဖြတ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရအမေရိကန်အိမ်ထောင်စုများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အစိုးရများထံမှအကြွေးဒေါ်လာ ၅၀.၇ ထရီလီယံရှိသည်။ ၎င်းသည်ယူအက်စ်တစ်ခုလုံး၏စုစုပေါင်းနှစ်စဉ်စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန် ၃.၅ ဆဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် US တွင်အကြွေးတင်နေသောအခွန်ထမ်းများကကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကြွေးမြီများနေသောအစိုးရဗျူရိုကရေစီ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနည်းပါးသောအာမခံလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောဘဏ်စနစ်သည်အလွန်အမင်းနည်းပါးသောဘဏ်စနစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားသည်။ ထို့ကြောင့်“ ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းသည်လုံခြုံမှုရှိပါသလား” ဟုကျွန်ုပ်တို့မမေးသင့်ပါ။ အဲဒီအစားကျနော်တို့က "အမေရိကန်ဘဏ်လုပ်ငန်းလုံခြုံမှုရှိရဲ့လား?" လို့မေးသင့်တယ်။
ဤအရာသည်ခြိမ်းခြောက်မှုမျှသာမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒါဟာတကယ်တော့ပြီးနောက်တကယ်တော့အပေါ်အခြေခံပြီးအစိုင်အခဲအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်အစာအိမ်တွင်းတွင်းရှိကျောက်တုံးတစ်တုံးကဲ့သို့ထိုင်။ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းသောသဘောပေါက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေဟာဘဏ်ကိုသွားနေပြီးသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ငွေတွေကိုဘဏ်တွေထဲအပ်နှံပြီးဘဏ်တွေဟာလုံခြုံတယ်လို့ယုံကြည်နေကြတယ်။ သေချာတာပေါ့၊ လုံခြုံတယ်၊ ငါတို့ထင်လိမ့်မယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဘဏ်ပါပဲ။
သို့သော် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အစပိုင်းအထိ FDIC ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစာရင်းဇယားများကိုကြည့်လျှင်အမေရိကန်ဘဏ် ၅၅၅ ခုပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ ၅၅၅။ FDIC သည်ငွေလက်ကျန်တစ်ခုလုံးအတွက်အာမခံကြေးကိုအာမခံမထားကြောင်းသတိရပါ။ သူတို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ ကိုသာဖုံးအုပ်ထားသည်။ သင်၏ဘဏ်ပျက်ကွက်ပါကထိုပမာဏထက်ကျော်လွန်သောအရာအားလုံးသည်လေထုထဲသို့ကျသွားနိုင်သည်။
၀ ါရှင်တန်အပြန်အလှန်ဘဏ်အတွက်ဘေးဆိုးကျရောက်စေသည့်ကပ်ဘေးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုသတိရပါ။ ဒါက အမေရိကန်သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးဘဏ်ပျက်ကွက်မှု။ တစ်နေ့တွင်ငွေသွင်းသူများကအရာရာအားလုံးကောင်းမွန်သည်ဟုထင်ကြသည်။ နောက်တစ်နေ့မနက်တွင်သူတို့သည်နိုးလာပြီးသူတို့၏ဘဏ်သည်မရှိတော့ကြောင်းသိလိုက်ရသည်။
ဤသည်မှာယနေ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းသို့ထည့်သွင်းထားသောယုံကြည်ချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အဖြစ်မှန်အသစ်မှနိုးထဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်အချက်အလက်များသည်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းကို ဦး တည်စေသည်
ဤထင်ရှားသောအချက်အလက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်သို့ကျဉ်းမြောင်းစေသည်။ ဘယ်အချိန်မှာအဓိကအပေါငျးတို့သ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ တကယ်တော့အတည်ပြုချက်ကိုဒီအမှန်တရားအပေါ်အလင်းကိုသွန်းလောင်းသောအခါ, အနည်းငယ်သာဆင်းရဲသားဖြစ်ကြ၏။ သင်၏ရန်ပုံငွေ၏အနည်းဆုံးရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်ပတွင်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာများတွင်ထားခြင်းသည်သဘာဝကျသည်ဟုသင်မထင်ပါလား။
ငါသေချာပေါက်အဲဒီလိုထင်လိမ့်မယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကောင့်တခုဖွင့်ဖို့အရေးယူသင့်တယ်။ ကိုသုံးပါ ဖုန်းနံပါတ် or ပုံစံကိုဖြည့်ပါ ဒီစာမျက်နှာမှာ ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အတူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကူညီပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ လူများအား၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
တရားစီရင်ရေးစနစ်များကိုကောင်းမွန်သောဘဏ္andာရေးအခြေအနေဖြင့်ငြိမ်းချမ်းသောအစိုးရများနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ လူများနှင့်ဥပဒေပြုအမတ်များသည်သူတို့ပြောသည့်အရာထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကဘဏ္stabilityာရေးတည်ငြိမ်မှုအတွက်နာမည်ကောင်းရှိရင်ဒါကသင့်ရဲ့ဘဏ္haveာရေးနေရာကိုရွေးဖို့ဝေးလံတယ်။
သင်၏ကမ်းလွန်ငွေအားလုံခြုံစိတ်ချရခြင်းသည်ကေးမန်ကျွန်းများနှင့်ဟောင်ကောင်ကဲ့သို့သောအခွန်ရှောင်ရာနေရာများတွင်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ ဒါဟာပိုင်ဆိုင်မှုများအမျိုးမျိုးအကြောင်းပါ။ The ဥပမာအားဖြင့်အမေရိကန်အစိုးရသည်သင်၏ကမ်းလွန်ရန်ပုံငွေရှိမရှိကိုဂရုမစိုက်ပါ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်သင်၏ဝင်ငွေအစီရင်ခံအဖြစ်။ ကမ်းလွန်၌ငွေများကိုနေရာချထားခြင်းသည်များသောအားဖြင့်အခွန်အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့အခွန်တိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချမထားဘူး။ သန်းနှင့်ချီသောနိုင်ငံသားများသည်ကမ်းလွန်အကောင့်များရှိပြီးသင်၌လည်းရှိပါကအခွန်အာဏာပိုင်များထံအလံနီကိုမတင်ကြပါ။
၏ထွန်းနှင့်အတူ အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်တယ်လီဖုန်းနှင့်ဒက်ဘစ်ကတ်များ၊ ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းသည်လမ်းပေါ်ရှိဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်များစွာကွာခြားသည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ ဒေသခံဘဏ်များကပေးသောငွေထက်များသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသော၊ များသောအားဖြင့်အတိုးနှုန်းများကမ်းလှမ်းသောဘဏ်များကိုရှာဖွေရန်မှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့စဉျးစားပါ။ ယူအက်စ်တွင်လုပ်ခသည်အခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းစာလျှင်အလွန်မြင့်မားသည်။ R ကိုeal အိမ်ခြံမြေစျေးနှုန်းများမြင့်မားသည်။ အခွန်မြင့်မားတယ် ၀ န်ထမ်းကျန်းမာရေးအာမခံသည်ခေါင်မိုးမှတဆင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကုန်ကျစရိတ်များသည်အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ ကနေဒါတို့တွင်ဘဏ်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသည်higher အခြားပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းနိုင်ငံများ။ အကယ် ကမ်းလွန်ဘဏ်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာနည်းသည်သင်၏ငွေသွင်းသူအားသင်ပိုမိုပေးဆပ်ရန်ကျန်တော့မည်။
သင်၏ဒေသခံဘဏ်သည်သင်အမြောက်အများရနိုင်သည်ဟုပြောသောတီဗီကြော်ငြာကိုမထုတ်တော့ပါ ကမ်းလွန်အကျိုးစီးပွားပိုကောင်းတဲ့နှုန်းကို။ ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲနိုင်ငံခြားဘဏ်များသည်ပြည်တွင်း၌တရားဝင်ကြော်ငြာခွင့်မရှိပါ။ ဒါဆိုသင်ဘယ်လိုနောက်ထပ်သိ ဦး မလဲ။ သူတို့ကခင်ဗျားကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူး ကမ်းလွန်ဘဏ်များပိုမိုအားကောင်းလာသည် လမ်းပေါ်မှာဆင်းဘဏ်ထက်။
ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂျာမနီ၊ Australiaစတြေးလျ၊ စင်္ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်နှင့်အခြားနိုင်ငံများစွာတွင်အလွန်ခိုင်မာသောလုံခြုံသည့်ဘဏ်များရှိသည်။ သင်၏အမှန်တကယ်အတွင်းစိတ်ကျဉ်းမြောင်းသည်မှာဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းစင်တာများ နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်မည်၊ တိုးတက်မှုရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်၊
ကမ်းလွန်အကောင့်များဖွင့်လှစ်ရန်အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး ဦး ၏လမ်းညွှန်မှုကိုရရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မည်သည့်ဘဏ်သူတို့ကိုယ်သူတို့အကြီးကြည့်ရှုစေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တစ်ယောက်ယောက်ပဲ - ကျနော်တို့ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထူထောင်ပါပြီ ကမ်းလွန်အကောင့်များ - မိမိတို့ငွေသွင်းသူများအားမည်သည့်နည်းဖြင့်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံသည်ကိုသင်ပြောနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းတို့ရဲ့ပိုက်ဆံအကြောင်းပြောနေတာပါ။ သေချာတာပေါ့၊ နည်းနည်းကုန်ကျနိုင်တယ် ဖြစ်ကောင်းသင်ထင်ထက်အများကြီးလျော့နည်း။ ဒါပေမယ့်မှားယွင်းတဲ့ဘဏ်ကိုရွေးတာကပိုကောင်းပါတယ်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပေးသူများကကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်တရားဝင်ကြော်ငြာခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်ပြည်တွင်းဘဏ်များသည်ကြီးမားသောနိုင်ငံရေးအလှူရှင်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သတင်းအချက်အလက်မရှိခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေနေသောဘက်မလိုက်သတင်းအချက်အလက်များပေါင်းစပ်မှုရှိသည် ကမ်းလွန် အကောင့်။ ရလဒ်အနေနှင့်အချို့လူများက၎င်းသည်တရားမ ၀ င်ဟုမှားယွင်းစွာထင်မြင်ယူဆကြသည်။ အချို့က၎င်းသည်အခွန်ရှောင်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ အချို့ကရာဇ ၀ တ်သားများက၎င်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်ဟုထင်ကြသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ရှားပါးသည်၊ အကြောင်းမှာဘဏ်သည်မသန့်ရှင်းသောငွေများလက်ခံခြင်းအတွက်လိုင်စင်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမှန်တရားကတော့ခင်ဗျားကအမေရိကန်ကလား၊ UKဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေကိုအစီရင်ခံနေသမျှကာလပတ်လုံး၊ အစိုးရကဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းငါတို့နယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီးဒေါ်လာထရီလီယံပေါင်းများစွာပျံသန်းနေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏အကောင့်သည်ဖက်ဒရယ်ရေဒါအပေါ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုရှာဖွေနေသူတစ် ဦး အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ရွေးချယ်စရာအချို့ရှိပါသည်။ ရှိပါတယ် ကမ်းလွန် ဘဏ်များ သောအထူးပြု ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု တရားစွဲမှုကနေ။ အခြားဘဏ်များအနေဖြင့်ပမာဏကြီးမားသောစီးပွားရေးငွေပေးငွေယူအကောင့်များလိုအပ်သူများအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ အခြားသူများကအထူးပြု ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်များလည်းရှိသည် တန်ဖိုးနည်းအွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ် Do-it-yourself ကုန်သည်များအတွက်။ အချို့သည်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကဲ့သို့သောအနည်းဆုံးအပ်ငွေများလိုအပ်သည်။ အခြားသူများမှာမူအမြင့်မားဆုံးအသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးဘဏ်စာရင်းဖွင့်သောအခါအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀၀ (သို့) ထိုထက်များသည့်သိသာထင်ရှားသောအပ်ငွေများလိုအပ်သည်။
အချို့ဘဏ်များသည်ပြည်တွင်းဘဏ်များထက်အတိုးနှုန်းပိုများ။ ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများကပြည်တွင်းစျေးကွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နှုန်းထားများပေးဆောင်။ ကွတ်ကျွန်းများကဲ့သို့သောကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုများသည်နိုင်ငံခြားဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့်ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ၎င်းတို့သည်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရန်ရှာဖွေသူများအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ထူထောင်တဲ့အခါ နိုင်ငံခြားဘဏ်စာရင်းများ, သင့်ရဲ့လုံ့လဝီရိယနှင့်သိ - သင်၏ဖောက်သည်စည်းမျဉ်းများတစ်လောကလုံးဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံခြားဘဏ်စာရင်းများကိုခွင့်ပြုသည့်ဘဏ်စနစ်သည်၎င်းတို့၏တိုင်းပြည်များမှအခွန်ရှောင်ရန်ကြိုးစားနေသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလက်ခံရန်စိတ်မရှည်သည်။ သင်၏ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်သည်တရား ၀ င်မှုရှိစေရန်သင်၏လျှောက်လွှာကိုလည်းသူတို့စစ်ဆေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လိုပါကပြင်ဆင်ပါ။ သင်၏အမည်နှင့်သင်၏သိုက်သည်မည်သည့်နေရာမှဖြစ်ကြောင်းအပြည့်အ ၀ ထုတ်ဖော်ရန်သင့်အားသူတို့ကတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
ဘဏ်များအားလုံးသည်သင့်ကိုမှန်ကန်စွာမှတ်ပုံတင်ပေးရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည်။ အချို့ဘဏ်များကသင့်အားစာရွက်စာတမ်းများကိုစာဖြင့်ပို့ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အခြားသူများကသင်ကိုယ်တိုင်ပေါ်လာရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘဏ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကြောင့်၊အရည်အချင်းပြည့်မီနိဒါန်း"ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နိုင်ကြသည် အကောင့်ဖွင့်ပါ လူများသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့ဤမျှလောက်မတတ်နိုင်ဘယ်မှာဖောက်သည်များအတွက်။ ထို့အပြင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အများစုသည်အမေရိကန်သို့မဟုတ်ကနေဒါလူမျိုးများအတွက်ငွေစာရင်းများကိုပင်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဖွင့်မယ့်သူတွေကိုငါတို့သိတယ် နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အကောင့်နှင့်ခရီးသွားစရာမလိုဘဲ။ ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်သောမေးခွန်းများအတွက်နောက်ထပ်အဖြေများရရန်ဤစာမျက်နှာရှိပုံစံသို့မဟုတ်အထက်ပါနံပါတ်ကိုသုံးပါ။
နောက်ဆုံးဇန်နဝါရီလ 27, 2021 ရက်တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်